कोभिड–१९ बारे अहिलेसम्म पत्ता नलागेका कुराहरु – खोजखबर | Khojkhabar
गोरखा,चैत १६ गते आइतबार ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी अहिले विश्वभर फैलिएको छ । भाइरसका कारण विश्वभर ३० हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ । यो भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि विश्वभर विभिन्न प्रयास भइरहेको छ ।
तर, वैज्ञानिकहरुको अथक प्रयासकाबीच पनि कोरोना भाइरसबारे धेरै कुरा थाहा पाउन सकिएको छैन । यो रोगबाट अहिलेसम्म पत्ता नलागेका प्रश्नहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ ः
१. कति मानिस प्रभावित छन् ?
यो सबैभन्दा आधारभूत तथा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । अहिले विश्वभर छ लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ । तर, यो संख्या समग्र संक्रमितको केही भाग मात्र हो । किनकी कुनै लक्षण नदेखिएका मानिसहरु पनि संक्रमित हुने गरेको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा मानिसलाई रोग लागिसकेको हुन्छ । तर, वास्तवमा उनीहरुलाई यो कुरा थाहा हुँदैन ।
तर, अहिले विकास भइरहेको एन्टिबडी परीक्षणले सबै मानिसमा यो भाइरस रहेनरहेको भन्ने परीक्षण गर्न सकिन्छ । त्यसपछि मात्र कसरी यो भाइरस फैलिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ ।
२. कत्तिको प्राणघातक छ ?
हरेक दिन सयौंको संख्यामा कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित भेटिने गरेको छ । मृत्यु हुनेहरुको संख्या पनि बढ्दो छ । तर, वास्तविक मृत्युदर पत्ता लाग्न सकेको छैन । एउटा समयमा संक्रमितमध्ये एक प्रतिशत मानिसको ज्यान जाने गरेको बताइएको थियो । तर, अत्यधिक मात्रामा लक्षण नदेखिएका संक्रमित पनि रहेकाले मृत्युदर अझै कम हुनसक्ने बताइएको छ ।
३. पूरा लक्षण
यो भाइरसको मुख्य लक्षण ज्वरो आउने र सुख्खा खोकी लाग्ने हो । केही संक्रमितमा घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने र पखाला पनि लाग्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै भाइरसका संक्रमितले गन्ध थाहा पाउने शक्ति पनि गुमाएको बताइएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने अहिले यो भाइरसका सामान्य संक्रमितमा पनि रुघाखोकीजस्तो लक्षण देखिएको छ । तर, कुनै लक्षण नै नदेखिए पनि भाइरसको संक्रमण हुनसक्ने पनि पुष्टि भइसकेको छ ।
४. बालबालिकाको भूमिका
बालबालिकामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनसक्छ । अहिलेसम्म बालबालिकामा धेरैजसो भाइरसको सामान्य संक्रमण देखिएको छ । अन्य उमेर समूहको तुलनामा यो भाइरसबाट मृत्यु हुने बालबालिकाको दर पनि कम छ ।
तर, यो रोग फैलाउन बालबालिकाको भूमिका भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । सामान्य हिसाबमा यस्ता संक्रामक रोग फैलनुमा बालबालिकाको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, कोरोना भाइरसमा भने उनीहरुको भूमिका पत्ता लागेको छैन ।
५. कहाँबाट आयो ?
यो भाइरस सबैभन्दा पहिले चीनको वुहान शहरमा सन् २०१९ को अन्तिममा देखिएको थियो । वुहानको जनावर व्यापार हुने क्षेत्रबाट यो भाइरस फैलिएको थियो ।
आधिकारिक रुपमा सार्स–कोभ–२ नाम दिइएको यो भाइरस चमेरामा पनि देखिने भाइरस हो । त्यसैले चमेराबाट अर्को कुनै जनावरमा सरेको र त्यसपछि मानिसमा आएको अनुमान गरिएको छ । तर, अझै पनि चमेराबाट मानिसमा यो भाइरस ल्याउने माध्यम नै हो भन्ने पत्ता लाग्न सकेको छैन । यसले आगामी दिनमा अरु मानिसमा संक्रमण फैलाउनसक्ने आशंका छ ।
६. गर्मीयाममा भाइरस हराउँछ ?
रुघाखोकी तथा मौसमी फ्लु सामान्यतया गर्मीयाममाभन्दा पनि जाडो मौसममा बढी देखिन्छ ।
तर, अहिलेसम्म गर्मीयाममा यो भाइरस फैलिन्छ वा फैलिँदैन भन्ने कुरा पुष्टि भएको छैन । केहीले भने यो भाइरसले मौसमी असर पनि देखाउन सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । यो भाइरस गर्मीयाममा पनि नियन्त्रणमा आएन भने जाडो मौसममा यसले थप जटिल अवस्था निम्त्याउन सक्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
७. केही मानिसमा किन चिन्ताजनक लक्षण देखिन्छ ?
धेरैलाई कोभिड–१९ को सामान्य संक्रमण मात्र देखिने गरेको छ । तर, करिब २० प्रतिशत मानिसमा यो भाइरसको चिन्ताजनक लक्षण देखिएका छन् । तर, किन त ? त्यसमा मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता र वंशाणुगत कारण हुनसक्ने बताइएको छ ।
८. कति समयमा प्रतिरोधी क्षमता सकिन्छ ?
अहिलेसम्म यस विषयमा धेरै आशंका देखिएको छ । तर, केही तथ्यहरु पनि फेला परेका छन् । हाम्रो शरीरमा कति समयसम्म यो भाइरस रहनसक्छ भन्ने कुरा मानिसको प्रतिरोधी क्षमतामा निर्भर गर्छ । आफ्नो प्रतिरोधी क्षमता बढाउँदै यो रोगसँग सजिलै लड्न सकिन्छ । लामो समयको तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले दीर्घकालीन असरबारे भने अहिलेसम्म अध्ययन हुनसकेको छैन ।
तर, कोरोना भाइरसको संक्रमण निको भइसकेपछि पनि पुनः सोही व्यक्तिलाई यो संक्रमण देखिनसक्ने पुष्टि भएको छ । रोग प्रतिरोधी क्षमताको प्रश्न दीर्घकालीन रुपमा यसको असर बुझ्न निकै महत्वपूर्ण सावित हुनसक्छ ।
९. रुप परिवर्तन होला ?
भाइरसहरुले आफ्नो रुप परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरुको वास्तविक प्रकृतिमा ठूलो अन्तर देखिँदैन । सामान्य नियमअनुसार दीर्घकालीन रुपमा भाइरसको प्रकोप घट्दै जान्छ । तर, यसको कुनै ग्यारेन्टी भने छैन ।
कोरोना भाइरसले आफ्नो रुप परिवर्तन ग¥यो भने हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमताले यसलाई बुझ्न सक्दैन र विशेष खोपले पनि काम गर्दैन । जुन अहिले फ्लुमा देख्न सकिन्छ ।
गोरखा नगरपालिकामा विदेशबाट आएका ४२ जना होम क्वारेन्टाइनमा
कोरोना भाइरस ः बढी तौलका मानिसमा सङ्क्रमणको धेरै जोखिम किन ?
May 17, 2020 9:23 pm | By खोजखबर
Share on Your Social Media खोजखबरगोरखा, जेठ ४ गते अहिलेसम्म मोटोपनले मुटुरोग, क्यान्सर र मधुमेह जस्ता रोगहरूको जोखिम बढाउने थाहा भएको कुरो थियो। तर प्रारम्भिक अनुसन्धानले मोटो मानिसहरूलाई कोभिड(१९ को जोखिम पनि हुनसक्ने देखाएको छ। अहिले संसारभरि प्रकोप बनेको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणले बढी तौल भएका मानिसहरूलाई असर गरेको देखिएको हो? कैयौँ अध्ययनको विषय बनेको यही प्रश्नको जवाफ विज्ञहरूले खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन्। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएपछि शरीरमा के हुन्छकोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका लक्षण के हुन्... Read more →
March 29, 2020 8:59 pm | By खोजखबर
Share on Your Social Media खोज खबर गोरखा,चैत १६ गते आइतबार । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी अहिले विश्वभर फैलिएको छ । भाइरसका कारण विश्वभर ३० हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ । यो भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि विश्वभर विभिन्न प्रयास भइरहेको छ । तर, वैज्ञानिकहरुको अथक प्रयासकाबीच पनि कोरोना भाइरसबारे धेरै कुरा थाहा पाउन सकिएको छैन । यो रोगबाट अहिलेसम्म पत्ता नलागेका प्रश्नहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ ः १. कति... Read more →